जुन दिन एयरपोर्टको वाथरुममा श्रीमतिले कपडा फेर्न सकिनन्
August 26, 2017 August 26, 2017 Annapurna TV
सरसफार्इ अभियान्ता खेम शर्मा, स्याङजा/हाल अष्ट्रेलिया |
सन् २००८ मा म अष्ट्रेलिया गएको थिए । सुरुमै मैले सरसफाईको क्षेत्रमा काम गरे । मलाई सुरुका केहि दिनहरु साह्रै नरमाइला लागे । किनकी नेपालमा रहदा सानै भए पनि व्यापार गरेर बसेको मान्छेले ट्वालेट सफा गर्ने ब्रस समात्नु पर्यो । समय वित्दै जादाँ मैले बुझे, काम ठूलो सानो केहि पनि हुदो रहेनछ । मेरो पढाईदेखि अन्य खर्च र केहि पैसा यहिबाट बचत हुन्छ भने मैले यहि काम किन नगर्ने रु भन्ने मनमा अठोट लिए । मैले यहि अठोटका साथ सरसफाई कर्मलाई व्यवसायिक बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्नतिर लागे । त्यसमा म सफल पनि भए ।अष्ट्रेलियामै रहदाको कुरा हो, २०१२ को अक्टोवरमा विहेको लागि हाम्रो इंगेजमेन्ट भयो । हामी विहे गर्न नेपालमा आउदाको एउटा घटनाक्रमले मेरो दिमागलाई गिज्याइरह्यो ।
त्यतिबेला, मेरो श्रीमतिले एयरपोर्टको वाथरुममा दुर्गन्धका कारण कपडा फेर्न नसकेको कारण, ममा लाज उत्पन्न भएर आयो । मलाई मेरो मनले भन्यो, अष्टेलियामा म यत्रो सफाईको काम गरिरहेको छु अनि आफ्नै देशमा आउदा आज यो अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो । श्रीमतिले कपडा पनि फेर्न नसक्ने विमानस्थलको दुर्गन्धित वातावरणले प्रश्न जागेर आयो । तैले आफ्नो देशको लागि के गरिस त भनेर ? अष्ट्रेलियामा मैले सरसफाईको स्तर धेरै माथि पुगेको पनि देखेको थिएँ । मैले हाम्रो देशको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सफाई पनि किन नगर्ने ? भन्ने लागेर यो सोच बनाए । त्यसबेला देखि मैले एयरपोर्टको बारेमा सोधपुछ गर्न सुरु गरे । त्यसवीचमा धेरै आउजाउहरु पनि भए । तर मैले भन्ने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको पहुँच त्यति सम्भव थिएन ।
लेखकः खेम शर्मा सफाई अभियन्ता, स्याङजा । हाल अष्ट्रेलिया
यहि सिलसिलामा दुई वर्ष अगाडि हामीले भरतपुर विभानस्थलबाट सफाई गर्ने काम सुरु गर्यौ । त्यहाँ भर्खर सरुवा भएर आउनु भएका अधिकृत शिव शर्मालाई पनि परिवर्तन गर्न मन लागेको हामीले थाहा पायौं । भरतपुरमा हामीले गरेको काम मिडियामा आइसकेपछि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा यस्तो गर्न सकिने रहेछ भन्ने लागेर आयो । मैले अरुपनि आन्तरिक विमानस्थलहरु हेरेको छु, ती मध्ये पोखराको विमानस्थल धेरै सफा लाग्यो तर अझै राम्रो बनाउने प्रशस्तै ठाउँहरु छन् ।त्रिभुवन विमानस्थल सफाईको सन्दर्भमा म सोचिरहन्थे । यसैक्रममा एनआरएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवन भट्टले चलाएको नमस्ते अभियान, कसरी पर्यटक नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ र उनीहरु फर्केर जादाँ कसरी खुशी भएर जान्छन् भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित थियो । सरसफाई यसको महत्वपूर्ण अंग भएकोले हाम्रो समन्वय भयो । यसमा विभिन्न क्षेत्रहरुको पनि संलग्नता छ । त्रिभुवन विमानस्थल २०१२ को तुलनामा २०१७ मा धेरै सफा भएको मैले पाए । तर अझै धेरै गर्न बाँकी थियो । समय क्रमसँगै, नेपालको एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिक तथा बैज्ञानिक सरसफाईको एक महिने स्वयमसेवी अभियान २०१७ जुलाई ३१ को बिहान ५ बजे हामीले सम्पन्न गरेका छौ । बेलुकीको १० बजेदेखि विहानको ५ बजेसम्म निरन्तर तीस दिन सात घण्टाका दरले २१ जना प्राविधिक र फिल्ड जनशक्तिले काम गर्दा हामीले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको मुहार फेर्न सफल भएका छौं । विमानस्थलको अवस्थालाई आधुनिक बनाउन हामीले संयुक्त रुपमा ४ हजार ५ सय घण्टा समय हाम्रो देशलाइ दिन पाएका छौ । हामीले गर्न सक्ने प्रयास गर्यौ । हामीलाई यसमा गर्व छ । मैले यो कामको नेतृत्व गरे पनि यो कामको मुख्य नायकहरु भने सम्पूर्ण मजदूरहरु हुनुहुन्छ । मलाई सहयोग र हौसला दिने अरु पनि धेरै हुनुहुन्छ ।
यो काम गर्नुमा हाम्रो एक मात्र स्वार्थ भनेको देशको माया अनि प्रेम हो । यदि नेपाल सरकारले चाहने हो र अवसर मिल्यो भने देश एक वर्ष भित्र सफा र सुन्दर बन्छ, अझ एक वर्ष पनि लाग्नु हुदैन भन्ने पक्षमा म छु । हामीमा सकरात्मक सोचको पनि आवश्यक छ, सबै नकरात्मक भएर हुन्न । मेरो विचारमा संसार एक जनाले परिवर्तन गर्न सक्दैन तर परिवर्तन गर्न एक जना पनि काफी हुन सक्छ ।मेरो अनुभवमा, हामी जे गर्छौ, त्यसलाई अनुशासित भएर, सिस्टम बनाएर र समयको ख्याल गरेर गर्ने हो भने काममा गुणस्तरियता आउँछ । जस्तै मेरो आमाले ३० मिनेटमा खाना बनाईसक्नु हुन्छ तर त्यही काम गर्न मलाई त्यसको तेब्बर भन्दा बढि समय लाग्छ । हामी भन्छौ, बरु समय लागोस तर काम राम्रो चाहिन्छ तर म त्यसमा सहमत हुन सक्दिन । मेरो विचारमा कम समयमा गुणस्तरिय काम गर्नुपर्दछ । यतिखेर देशलाई हाम्रो आवश्यकता छ । हामीले देशलाई केहि योगदान अवश्य दिनुपर्छ र हामी तीन करोड नागरिकले देशको लागि केहि योगदान दिन सक्यौं भने अवको केहि वर्षमै हामीलाई देशले केहि दिनेछ । हामीले चन्द्रमाको कुरा हैन, पैताला अघिको कुरा गर्नुपर्छ । ५० डिग्रीको गर्मिमा ३०/४० हजारको लागि दैनिक १२ देखि १६ घण्टा हाम्रा नेपाली दाजुभाईहरुले काम गरिरहेका छन् । यदि राम्रो नेतृत्व र इच्छा शक्ति हुने हो भने त्यतिको आम्दानी हाम्रै देशमा सम्भव छ । अमेरिकाको बजारमा आउदै गरेका आइफोन नेपालमा पनि हप्ता दिनमा आउँछ भने सरसफाईमा प्रयोग हुने उपकरणहरु पनि ल्याउन सकिदैन भन्ने त छैन् । यो अभियान अन्तर्गत हामीले प्रविधिहरु ल्याएर प्रयोग गरेर देखाएका छौं । हामीसँग इच्छाशक्ति छ भने गर्न खोजेको कुरा जसरी पनि पनि रोकिदैन । नेपालमा धेरै संरचना छन् र कामदारहरु पनि, तर कुरा आउछ, नेतृत्वको । कुनै पनि कुराको लागि नेतृत्वको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हाम्रो देश र यहाँका भवनहरु साना हुनु कुनै ठुलो विषय होइन । नेपालमा ठूला भवनहरु भए पनि ती भवन हेर्न भनेर कोहि पनि यहाँ आउदैन बरु सानो भएपनि व्यवस्थित बनाउन सक्यौ भने पर्यटकहरु अहिलेको तुलनामा धेरै आउने छन् । सरसफाई सभ्यताको प्रतिक पनि हो । हामीले विमानस्थलमा सरसफाईको अभियान संचालन गरेर विदेशमा भएको हाम्रो ज्ञान , सीप र प्रविधि तथा भावना हस्तान्तरण गर्न खोजेका थियौ ,त्यसमा हामी सफल भए जस्तो लाग्छ । हामीलाई विश्वास छ कि, हामीले सिकाएको सीपबाट विमानस्थल सधै सफा र सुन्दर रहिरहने छ । अब सरसफाई जस्तो अनिवार्य र महत्वपूर्ण विषयलाई अभियानका रुपमा संचालन गरिरहनु भन्दा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सरसफाई गर्ने कामलाई इमान्दार भएर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले नेपालमा सरसफाई सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरेर कार्यन्वयनमा ल्यााउनु पनि अनिवार्य छ । जनताको साथ, समर्थन र सहयोग निरन्तर हुनु एकदमै आवश्यक छ । अन्यथा, यस्ता अभियानहरुको अस्तित्व समाप्त भएर नजालान् भन्न सकिन्न ।
लण्डनको बकिंघममा युवकले पुलिसलाई चक्कु प्रहार गरे
रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनः उद्योगी उत्साहित
December 08, 2017 Annapurna TV 0
संघिय संरचना सहितको ऐतिहासिक निर्वाचन र अबको बाटो
लामोे संक्रमणकालको अन्त्यको अपेक्षासहित अहिले ऐतिहासिक संघीयता सहितको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । विश्लेषकहरु यो चुनावले...
November 18, 2017 Annapurna TV 0
चुनावमा असल प्रतिनिधि चुन्नसके हामी नयाँ नेपाल प्राप्तिको सँघारमा छौँ
नेकपा माओवादीले सशस्त्र बिद्रोहताका बाँड्दै हिँडेको नयाँ नेपालको सपनाले साकार रूप लिन लागेको छ । यसका...
नेताका आश्वासनको चाङमा पुरिएर जनता सोध्दैछन कसका कुरा पत्याउने
बद्री तिवारी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मुलुकका राजनीतिक दलहरू आफ्ना बलबुताले भ्याएसम्म आश्वासनका पोका...
चुनाबमा हाम्रो सहभागिता, व्यप्त राजनीतिक समस्याको समाधानका लागी
सीपी गजुरेल संविधानमा असहमति जनाउँदा-जनाउँदै पनि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा हामीले क्रान्तिकारी उपयोगको नीतिअन्तर्गत सहभागिता जनाएका...
विदेशनीतिका सवालमा पार्टीका घोषणापत्र यथार्थवादी होईनन
डा. देवीप्रसाद सुवेदी दोस्रो विश्वयुद्धपछि र खास गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको उदयपछि विश्वमा उदाएका पुँजीवादी र...
November 13, 2017 Annapurna TV 0
कर्मचारीले पेसागत मर्यादा जोगाउनुपर्छ
लोकदर्शन रेग्मी, नेपालमा नागरिक र सरकारले विश्वास गरेको संस्था भनेको निजामती सेवा हो । त्यही सेवालाई...
November 08, 2017 Annapurna TV 0
पूर्व राष्ट्रपतिको घर भाडा प्रकरणले ल्याएको तरङ्ग !
राजेशचन्द्र राजभण्डारी । कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने झै यतिबेला नेपालका पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण...
November 05, 2017 Annapurna TV 0
मानव जीवन अन्त्यको अनिवार्य शर्त मृत्यु हुदाँ हुदै किन गर्छन आत्महत्या ?
विक्रम सापकोटा काठमाडौँँ । गत कात्तिक ४ गते झापाकी २२ वर्षिय युवती रिचा सेढाईले फेसबुकमा फोटो...
October 26, 2017 Annapurna TV 0
राजनीतिक ध्रुवीकरको जोखिम: देश दीर्घ अस्थिरताको बाटोमा
डा. युवराज संग्रौला | नेपाली राजनीतिको बेग झन् बढी तीव्र र अलोकतान्त्रिक भइरहेको छ । स्थानीय...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले राज्यका काम–कारबाही खुला
कृष्णहरी बाँस्कोटा, लोकतन्त्रको आगमनसँगै नेपालमा राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक पदाधिकारीबीच शक्तिको बाँडफाँड गर्न सुशासन ऐन ०६४...
धनाढ्यमा कायाकल्प हुनका लागि अवैध आम्दानी सबैभन्दा सरल माध्यम
रामेश्वर खनाल, मुनाको बोली, लाग्दछ गोली ! सम्झन्छ मनले, क्या मीठोसँग सम्झाई भन्थिन्– के गर्नु धनले...
कांग्रेसले चुनावअघि लिनुपर्ने बाटो
पुरुषोत्तम दाहाल, नयाँ राजनीतिक संरचनाअन्तर्गत पहिलो पटक प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । पहिलो...
October 18, 2017 Annapurna TV 0
एनआरएनए महाधिवेशनमा नदेखिएको पाटो, यसकारण हारिन् जमुना गुरुङ
राजकुमार थापा विश्वभरका नेपालीहरुको साझा संस्था मानिएको गैर आवासीय नेपाली संघको आठौं विश्व सम्मेलन नयां नेतृत्व...
One thought on “जुन दिन एयरपोर्टको वाथरुममा श्रीमतिले कपडा फेर्न सकिनन्”
नेपाल सरकार अन्धा र बैराहरुको जमात हो । तपाईं जस्ता व्यक्तिले आँखा खोल्दिन पर्छ अनि कानमा झिर घोच्न पर्छ ।